Faallooyinka Tomorro 2021: Dadku ma guuleystaan ​​gabi ahaanba mise waa khiyaano?
Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Tomorro 2022: Dadku ma Guulaystaan ​​Mise Waa Fadeexad?
Isha Sawirka; tomorro.global
Tomorro waa degel u maleeya inuu si toos ah ugu diro digniinaha bixinta. Tomorro, oo ah shirkad sheegata inay leedahay ROKT Pte Ltd, waa mawduuc muran badan leh.
Maqaalkani waa dib -u -eegis Tomorro ah oo ka jawaabaya su'aalahaas oo culeys saaray maskaxda kuwa xiiseynaya bixinta isla markaana xanibay maskaxda kuwa jeclaan lahaa in su'aalahaas la nasto.
Fiirinta websaydhka tomorro waxay muujineysaa noocyo kala duwan oo sawirro ah iyo fursado loo heli karo qabsashada.
Su’aalaha dhibsaday booqdayaasha mareegaha ayaa ah “Dadku ma wada guulaysanayaan mise waa khiyaano?” iyo “Sideen u hubnaa in mareegaha uusan qabsan karin faahfaahinta booqdayaasha mareegaha, keydsado, una adeegsado wax aan xad lahayn?”
Maqaalkani wuxuu sharxayaa waxa jira oo dhan oo ku saabsan Tomorro, dib -u -eegista Tomorro, iyo inta qof ee ka faa'iiday masraxa.
Fiirinta xiisaha leh ee taariikhda Tomorro waxay maskaxda ku haysaa ifafaale loo yaqaan baraf madow. Haddii aad waligaa la kulantay baraf madow waqti kasta, ugu khatarsan markaad baabuur waddo, markaa isla markiiba waad sheegi kartaa halka dib -u -eegistu ku socoto.
Dadka u baahan ama aad u danaynaya inay helaan hadiyado lacag caddaan ah ama guud ahaan wax -bixinta, qof walba iyo wax walbaaba waa badbaadiye suuragal ah. Raadinta deeq -lacageedka, ayaa ah halka barafka madow ay u badan tahay inuu ka soo muuqdo.
Waa maxay Tomorro giveaway?
Bixinta waa isku -darka xayaysiinta halkaas oo abaalmarino lagu siinayo shaqsiyaadka loo doortay si aan kala sooc lahayn. Si aad ugu guuleysato isku aadkaan, waa inaad ugu yaraan ka qeybqaadataa. Lacag -bixinnadani inta badan bilaash maahan maadaama qaar ay u jihaysan yihiin kordhinta ka -qaybgalka ama ballaarinta saldhigga macmiilka.
Saddex nooc oo wax -bixinno ah
waa abaalmarinno abaalmarinno halkaas oo kuwa ku guuleysta lagu doorto nasiibka isku aadka. Abaalmarintu waxay noqon karaan wax kasta oo aad ka fekeri karto, laga bilaabo kaararka gacanta lagu sameeyo ilaa safar kharash badan lagu bixiyo.
#2 - Tartanka
dooro guuleyste ku saleysan mudnaanta qaar. Ku guuleystaha waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo qaar ka mid ah shuruudaha sida sawirka ugu fiican, codadka ugu badan ee fiidiyaha, cuntada ugu fiican, iwm.
#3 - Bakhtiyaanasiib
waa sawir abaalmarin ah oo ay tahay in dadku lacag bixiyaan si ay u iibsadaan fursad ay ku guuleystaan. Bakhtiyaa -nasiibka si aad ah ayaa loo nidaamiyaa mana aha in la maamulo iyada oo aan lala tashan lataliye sharci. Xayeysiisyada badankood waa tartamid iyo websaydhka Tomorro ayaa sheegaya inay sidoo kale tahay mid.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Dib -u -eegista Cashcrate 2021: Lacagtii Ugu Dambeysay Lacag Ka Samee Online?
Qaabka lagu go'aamiyo nooca dhiirrigelinta ee socota.
#1 - Abaalmarin
Miyaan wax ku guuleysaneynaa? Kuwii kale wax ma ku guulaysanayaan? Miyaan ku guuleysan karaa wax? Ma guulaystuhu wuxuu qaataa nooc kasta oo xaalad ah? Waa maxay abaalmarintan? Ma haysaa waxa ay qaadato? Aqoonta ku saabsan waxaad ka qayb qaadanayso.
#2 - Fursad
Ma nasiib saafi ah? Miyuu jiraa qof u taagan fursad uu ku guuleysto abaalmarinta weyn? Xirfadaha qaarkood ama shuruudaha codeynta ayaa ka caawiya fursadda laakiin inta badan way adagtahay in la maareeyo oo aad u xaddido tirada dadka soo galaya.
#3 - Tixgelin
U baahan qof inuu "ku jeclaado" ama "ku raaco" waxaa laguu macnayn karaa tixgelin. Xitaa ka sii muhiimsan, weydiinta qof soo galaya inuu aado goob dhinac saddexaad ah, maraan si uu u helo badeecad ama adeeg, ka dibna dib ugu soo wargeli goobtaada waxay xitaa u badan tahay in loo arko tixgelin.
Fahamka nooca xayeysiinta ee socota ayaa go'aamin doonta haddii loo kala saari doono siisid sharci ah ama khiyaano.
Waa maxay barafka madow sidee buu u khuseeyaa xalaal ama khiyaano?
Barafka madow waa jaakad khafiif ah oo baraf aad u hufan leh. Sababta ay hufan tahay ayaa ah inay ku dhex milmaan laamiyada waddooyinka maadaama ay aad u dhuuban tahay, taasoo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in la arko. Waxaa loogu yeeraa baraf madow maadaama uu u eg yahay madow, sida midabka laamiga waddada ee uu ku dul samaysmo.
Tusaale ahaan, waxay muujinaysaa khatarta. Nooca aanad waligaa arag ee imanaya. Nooca gilgilaya xaqiiqadaada iyo garashadaada oo indhahaaga u furaysa runta cabsida leh ka dib markaad la kulanto.
Marka qof uu sheego baraf madow, waxay u taagan tahay digniin, mid ay tahay in la dhegaysto. Shabakadaha sida Tomorro ee bixiya wax -bixinta waxay leeyihiin rabitaan kordhay inay noqdaan xaalado baraf madow.
Muxuu sameeyaa Tomorro?
Markaad furto shabakadda, oo aad u jihaysato astaamaha, waxaa jira xannibaadyo macluumaad oo muujinaya nooca waxyaabaha uu degelku bixiyo. Bogga waxaa ka buuxa cinwaano sida “guuleystaha abaalmarinta fasaxa,” “tartan sanadle ah oo $ 30k ah,” “tartan lacageed” iwm.
Websaydhku wuxuu dadka ku abaalmariyaa si aan kala sooc lahayn markay sameeyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Qoraal ku yaal bogga astaamaha ayaa sidaas u akhrinaya “Bal qiyaas helitaanka wicitaan aad u malaynaysay inuu aad ugu fiicnaa inuu run noqdo kaliya si loo garto inay runtii la yaab ku ahayd nolosha.
Taasi waa nooca xiisaha leh ee Lynda Powers dareentay markii lagu wargeliyay inay ku guuleysatay Tartanka Fasaxa ee 2018 - 2019 ee Tomorro! Sida dadka ugu badan ee tartamada ku soo gala khadka tooska ah, Lynda ma aaminsani inay taasi ku dhici karto iyada laakiin sida aan jecelahay inaan halkaan ka dhahno 'Riyo kasta waa suurtogal Tomorro.
Tani waxay u sheegeysaa qof kasta oo akhrinaya dabeecadda sida wax u shaqeeyaan nidaamkan.
Waa maxay shuruudaha Tomorro?
Tomorro wuxuu u baahan yahay inaad is-diiwaangeliso, ka dibna aad ka dib tartammada aad arki karto oo furan. Hadda, iyadoo ikhtiyaarka is-diiwaangelintu uu yahay mid aan dhammaad lahayn oo aan la furin, shabakadu waxay leedahay dib u eegis u gaar ah oo muujinaya waxa ay u baahan tahay si loo galo tartamadan.
Mid ka mid ah Lynda oo faallo ka bixisay goobta ayaa laga soo xigtay isagoo leh “Aad bay u fududahay in la galo maxaa yeelay mar haddii aad gasho waxaad aadi kartaa tartamada oo dhan oo aad geli kartaa, geli kartaa, geli kartaa, geli kartaa, oo sidaas dabcan, waan sameeyay! Markaa runtii waa mid adeegsade-saaxiibtinimo leh iyo hab fudud. ”
Lynda ayaa iyaduna sii xiganaysa iyadoo leh “Gabadhayda 7-jirka ah waxay rabtaa inay aado Disneyland wiilkayga 4-jirka ahna wuxuu rabaa inuu aado MonsterJam marka waxaan hubaa in USA ay kaararka ku jirto waxaanan rajaynayaa inaan ka gudbi doonno Canada sidoo kale.
Runtii ma garanayno wali maadaama aan wali ka soo baxaynno xaqiiqda ah inaan guulaystay. Carruurtaydu si ay u arkaan Disneyland, tartankan la'aantiis ma jirto waddo adduunka ka dhici lahayd. Marka waa yaab. Waan barakaysannahay. ”
Dib u eegista Tomorro
Sida waqtiga maqaalkan, mareegaha ayaa u muuqda mid cidla ah oo aan firfircoonayn, iyo sida lamadegaanka oo kale, haddii aad isku aragto mid ka mid ah oo sugaya wax mucjiso ah inay dhacaan, markaa run ahaantii waa inaad naftaada eedaysaa haddii wax dhacaan adiga iyo lacagtaada.
Dib -u -eegiddan Tomorro ayaa halkan ku qaylinaysa "baraf madow." Haddii aad si lama filaan ah u aragto ogeysiis lacag -bixin lacageed oo aan ka dhicin goobta muddo laba sano ah, oo aad ku dhacdo, markaa eedda oo dhan adiga ayaa iska leh ee ma jirto cid kale.
Gunaanad: Tomorro khiyaamo ama sharci?
In kasta oo dib -u -eegista Tomorro laga yaabo inaysan si toos ah ugu yeerin Tomorro khiyaamo, waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan. Dabeecadda waxa mareegaha u maleeyo in uu sameeyo iyo waxa laga heli karo dhulka isma laha. Fiiri intaadan boodin!
10 Madal ee Kaarka Hadiyadeed ee Legit iyo Sida Loogu Guuleysto 2022